स्वास्थ्य र सुन्दरताका लागी मात्र हैन, मष्तिष्कको कार्यक्षमता बढाउन पनि तोरीको तेल उपयोगी - जान्नुहोस् यसका फाइदाबारे - ज्ञानविज्ञान
तोरीको तेल खासगरी भारत, रोम र ग्रिसमा हजारौं वर्षदेखि लोकप्रिय रहँदै आएको छ । सबैभन्दा पहिले यो ३ हजार बीसीमा भारतमा खेति गरिएको अनुमान गरिएको छ ।
तोरीको तेलमा ६० प्रतिशत मोनोस्याचुरेटेड फ्याट (मुफा), २१ प्रतिशत पोलीअनस्याचुुरेटेड फ्याट (पुफा) र १२ प्रतिशत स्याचुुरेटेड फ्याट पाइन्छ । यी फ्याटी एसिडलाई असल फ्याट भनिन्छ । यी चिप्लो पदार्थ मुटुको धमनकिा भित्तामा गएर बस्न सक्दैन । यसमा कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, भिटामिन र मिनरल पाइदैंन ।
तरकारीको महत्वपूूर्ण स्रोत भएकाले यसमा अल्फा लिनोलेनिक एसिड तथा ओमेगा फ्याटी एसिड हुन्छन् । एक चम्चा तोरीको तेलमा ०.८ ग्राम ओमेगा ३ फ्याटी एसिड पाइन्छ । यस्तै, एक टेबलचम्चा तेलमा १२४ क्यालोरी पाइन्छ । जसमा १४ ग्राम फ्याट हुन्छ । जसमध्ये ८.३ ग्राम मोनोस्याचुरेटेड फ्याट पाइन्छ, जुन ओलिभ आयल, अंगुरको बियाँ र बदामको तेलजस्तै हुन्छ ।
अनुसन्धानहरुबाट तोरीको तेलमा क्यान्सरविरुद्ध लड्ने तत्व पाइएको छ । यसमा पाइने लिनोलेनिक एसिड ओमेगा थ्रि फ्याटी एसिडमा परिवर्तन हुन्छ, जसले पेट तथा कोलोन क्यान्सर रोकथाम गर्छ ।
साउथ डकोटा युनिभर्सिटीको टोलीले गरेको अनुसन्धानले पनि यही कुरालाई प्रमाणित गरेको छ । उनीहरुले कोलोन क्यान्सर लागेको मुसामा तोरी, मकै र माछाको तेल प्रयोग गरेका थिए । तीमध्ये तोरीको तेलले बढी काम गरेको पाइएको थियो ।
तोरीको तेलमा मोनोस्याचुरेटेड र पोलिअनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड प्रशस्तमात्रामा पाइन्छ । यसका साथै ओमेगा थ्रि र ओमेगा सिक्स फ्याटी एसिड पनि पाइन्छ । यी फ्याटी एसिडले मुटु रोगको खतरा ५० प्रतिशतले कम गर्न मद्दत पुर्याउछन ।
तोरीको तेल हाइपोकोलेस्टेरोलेमिक (कोलेस्टेरोल घटाउने) र हाइपोलिपिडेमिक (लिपिड घटाउने) तत्व पाइन्छ । यसले एलडीएल (खराब) कोलेस्टेरोल घटाई र एचडिएल (असल) कोलस्टेरोल बढाउँछ । यसबाट मुटु रोगको खतरा कम हुन्छ ।
दम यस्तो रोग हो, जसको कुनै उपचार छैन । तर तोरीको तेलको उपयोगले यसको लक्षण र प्रभावलाई व्यवस्थित गरी घटाउन सकिन्छ । यो दमका लागि सबैभन्दा बढी प्रभावकारी सुरक्षित उपाय हो ।
खैरो तोरीको तेल छातिमा लगाउने हो भने फोक्सोमा हावाको आपूर्ति बढ्छ । एक टेबलचम्चा शुद्ध तोरीको तेललाई महमा मिसाएर दिनको तीनपटक खाने हो भने दमको आक्रमणलाई रोक्न सकिन्छ ।
यसका साथै तोरीको तेलमा अन्य फाइदा :
१. मष्तिष्कको कार्यक्षमता बढाउँछ
२. दाँत सेतो बनाउँछ र दाँतसम्बन्धी समस्या हटाउँछ
३. छाला स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्छ
४. शरीरका काला धब्बा हटाउँछ
५. प्राकृतिक सनस्क्रीनको काम गर्छ
६. छाला सुख्खा हुन दिँदैंन र संक्रमणबाट जोगाउँछ
७. कपाल झर्नबाट जोगाउँछ, सुख्खा हुुन दिँदैंन
८. कपाल चाँडै फुल्न दिँदैंन
९. तोरीको तेल चायाँ पर्न दिँदैंन
तेलसम्बन्धि अन्य केहि थप जानकारी :
कुन तेल खानु ठिक?
बजारमा विभिन्न थरीका तेलको उपस्थिति बढे पनि तोरीको तेलको प्रयोगमा कुनै कमी आएको छैन । यद्यपि समय समयमा तोरीको तेलमा अखाद्य वस्तुको मिश्रणका खबरहरु पनि आउने गरेका छन् ।
काठमाडौंको ढुंगेधारा बस्ने शिवा शर्मा घिमिरेले दाङबाट आफ्नै बारीमा फलेको तोरी मिलमा पिसेर तेल काठमाडौं ल्याउने गर्छिन् । उनले लगभग दस वर्षदेखि नै तोरीकै तेल प्रयोग गर्दै आएकी छिन् । ‘थोरै हाल्दा पनि चाहिने जति चिल्लो पदार्थ पाइन्छ ।
स्वाद पनि मिठो हुन्छ । त्यसमाथि आफ्नै बारीमा फलेको तोरीको तेलको स्वाद नै मिठो लाग्ने,’ उनले भनिन् । अहिलेसम्म आफूले आफ्नै बारीमा उत्पादन भएको तोरीको तेल प्रयोग गर्ने भएकाले बजारमा पाइने कुनै तेल नकिनेको उनी बताउँछिन् ।
खानामा पाइने मिठास एकातिर छ, तर तेलमा हुने तत्वहरु कति मानिसका लागि लाभदायक नहुन सक्छन् । त्यसमाथि बजारमा पाइने तेलमा मिसाइने अखाद्य वस्तुहरुले पनि स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गरिरहेका हुन्छन् । त्यसो त, हाम्रो शरीरका लागि ए, डि, इ, के भिटामिन प्राप्त गर्न चिल्लो पदार्थ चाहिन्छ । त्यो चिल्लो पदार्थ हामीले खाने तेलबाट पूर्ति हुने गर्दछ ।
कस्तो तेल प्रयोग गर्ने ?
पोषणविद् डा. जया प्रधान शरीरको वृद्धि विकासका लागि चिल्लो पदार्थ अति आवश्यक पर्ने बताउँछिन् । तर वनस्पति स्रोतबाट प्राप्त चिल्लोको तुलनामा घिउ, नौनी, मासुको बोसोबाट पाउने चिल्लो अलि स्याचुरेट हुने भएकाले हामीले जुनसुकै किसिमको पनि भेजिटेबल तेललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छिन् ।
‘स्याचुरेट फ्याट खान थाल्यौँ भने कोलस्ट्रोल बढाउने काम गर्छ । मुटुको समस्या पनि देखा पर्न सक्छ,’ उनी भन्छिन् । त्यसैले, नौनी, घिउ, बोसो, सकेसम्म खानामा समावेश नगर्ने र तरल अवस्थामा रहने चिल्लो पदार्थ ठिक्क मात्रामा खानामा समावेश गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुने उनी बताउँछिन् ।
वीर अस्पतालका प्रमुख डाइटिसियन राजेश्वर पाण्डे चिल्लोको नाममा घिउ वा तेलमा तारेर भुटेर स्याचुरेटेड फ्याटहरु खान नहुने बताउँछन् । काँचो अवस्थामा खाली शुद्ध तेल खानु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने उनी बताउँछन् ।
‘मेथी र ज्वानो परर्र पड्काएर होइन । राम्रोसँग तरकारी उसिनेर उमालेर बफाएर त्यसमाथि तेल राखेर खानुपर्छ,’ उनी भन्छन् । तेलको बारेमा राम्रोसँग बुझेर गुणस्तरमा ध्यान दिएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।
तेल कति र कसरी प्रयोग गर्ने ?
डा. प्रधान कुन खाना पकाइन लागेको भन्ने कुराले तेलको मात्रा निर्धारण गर्ने बताउँछिन् । दैनिक रुपमा मानिसलाई चाहिने शक्तिको २५ देखि ३० प्रतिशत क्यालोरी चिल्लो पदार्थबाट पूर्ति हुने गरी खानुपर्ने उनी बताउँछिन् । त्यसमा पनि स्याचुरेटेड फ्याटको मात्रा १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुनेमा उनको जोड छ ।
फ्राई गरेको खानेकुरा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने भएकाले त्यस्ता खानेकुराबाट टाढा रहन उनी सुझाउँछिन् । ‘अझ स्वास्थ्यको समस्या छ भने थप सजक हुनुपर्छ,’ प्रधान भन्छिन् । सकेसम्म काँचो तेल नै खानुपर्नेमा उनी पनि जोड दिन्छिन् ।
हामीले घरमै बनाउने तोरीको तेल राम्रो र शुद्ध हुने भए पनि स्वास्थ्यका लागि भने आलस, मकैलगायतका बनस्पति तेल लाभदायक हुने पाण्डे बताउँछन् । मखन भिटामिन ए र बीको राम्रो स्रोत भए पनि त्यो अन्य स्रोतबाट पाइने भएकाले ठूलो उमेरका मानिसलाई मखन पनि नखान उनी सुझाउँछन् ।
‘बढ्दो उमेरका बालबालिकालाई भने अलिकति मख्खन राखेर दिन सक्छौं । तर यसो गर्दा तताएर हैन मलेर दिनुपर्छ,’ पाण्डे भन्छन् । वनस्पति तेल पनि नतताई प्रयोग गर्न उनी सल्लाह दिन्छन् । तताएर धुँवा निकालेपछि त्यसमा भएको पौष्टिक तत्व नाश हुने र शरीरका लागि खराब हुने उनी बताउँछन् । तेललाई पानीमा उमालेर वा तरकारीमा पछि तेल हालेर खानु सबैभन्दा राम्रो हुने उनको सल्लाह छ ।
बिरामीले बार्नुपर्ने तेल
मुटुको बिरामी र कलेजोको समस्या भएका मानिसहरु चिल्लो पदार्थबाट टाढा रहनुपर्ने सुझाव डा. प्रधान दिन्छिन् । मधुमेहका बिरामीहरु तेलबाट टाढा रहनु नपरे पनि एउटा सीमामा सीमित हुनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छिन् । उनीहरुले पनि वनस्पति तेललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
पाण्डे पनि मुटुका बिरामीलाई चिल्लोबाट टाढा रहन सुझाव दिन्छन् । त्यसबाहेक, चिकित्सकको सल्लाहअनुसार अन्य रोगका बिरामीहरुले तेल र चिल्लो पदार्थ बार्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
बजारमा विभिन्न खालका तेलहरु पाइन्छन् । स्वदेशमा बनेकादेखि लिएर आयातित, सस्तो मूल्यदेखि महँगो मूल्यसम्मका तेलहरु पसलहरुमा पाइन्छ । तर समयसमयमा बजारमा अशुद्ध र अखाद्य तेल भएका खबरहरु पनि सुनिन्छन् ।
त्यसमाथि विभिन्न नाममा आउने गरेका विज्ञापनले पनि तेलप्रति आकर्षित गराइरहेको हुन्छ । तेलमा के मिसाएको छ वा कस्तो मिसाएको छ भनेर नाँगो आँखाले हेर्न नसकिने भएकाले तेल प्रयोग गर्ने बेलामा सचेत हुनुपर्नेमा पाण्डे जोड दिन्छन् । ‘तर सकेसम्म आलसको तेल, जैतुनको तेल, तोरी, रायो हो भने बुझेर खानुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
तेल किन्ने बेलामा सचेत हुन डा. प्रधानको सल्लाह छ । मिसावट भएका तेलहरु चाँडै बिग्रिने सम्भावना हुने भएकाले उपभोक्ताले किन्ने बेलामै ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछिन् । उनका अनुसार तोरीको तेल र भटमासको तेल प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।
स्वास्थ्य र सौन्दर्यका लागि तोरीको तेल :
Don't Miss it तरकारीको रुपमा खाने भान्टाले यस्ता रोगहरुलाई जरैबाट निको पार्दछ – जान्नुहोस् यसका फाइदाबारे
Up Next एक दिनमा मानिसलाई कति प्रोटिनको आवश्यकता पर्दछ ? जान्नुहोस् कुन खानेकुरामा कति प्रोटिन हुन्छ ?
निरोगी, जवान र तन्दुरुस्त रहन अपनाउनुस यी सुत्र
मानिस स्वास्थ रहन भनेको जहिले पनि उसको खानपिनको कारणले हो । हामीले विषेश हाम्रो खानामा धेरै ध्यान दिनुपर्छ । तल केहि…
धनिया खानुका फाइदाहरु, यस्ता छन्
स्वास्थ्यको लागि एकदमै लाभदायक मानिन्छ धनिया । अचारमा होस् वा तरकारीमा धनियाको मिश्रणले स्वाद दोब्बर बढाउँछ । धनियालाई तरकारी र…